အချစ်ကို လိုက်မရှာတော့တဲ့ သူတွေသာ တွေ့ရှိရမယ့် ပျော်ရွှင်မှု (၅)မျိုး … - Thadin
[ June 12, 2019 ] တစ်တန်းကျောင်းသူလေးကို (၉)တန်းကျောင်းသားက ကျောင်းအိမ်သာထဲခေါ် မုဒိန်းကျင့်…! NEWS
[ June 12, 2019 ] သမ္မတကြီး(ငြိမ်း) ဦသိန်းစိန်မှ ပြီးခဲ့​သည့်​ ဆယ်တန်းတွင် ဧရာဝတီတိုင်းက ထူးချွန်ကျောင်းသားများကို အငြိမ်းစားလစာမှ ထောက့်ပံမည်…! NEWS
[ June 11, 2019 ] ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်းကို အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းများ…! HEALTHY
[ June 11, 2019 ] မအိပ်တဲ့ အချိန်တွေများလာတဲ့ အခါ သင့်ခန္ဒာကိုယ်က ဒီလုိုတွေပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်…! HEALTHY
[ June 11, 2019 ] ဘုရား ၊တရား လုပ်ခြင်း၏ လက်ငင်း အကျိုးကျေးဇူး …! KNOWLEDGE
HomeRELATIONSHIPအချစ်ကို လိုက်မရှာတော့တဲ့ သူတွေသာ တွေ့ရှိရမယ့် ပျော်ရွှင်မှု (၅)မျိုး …
အချစ်ကို လိုက်မရှာတော့တဲ့ သူတွေသာ တွေ့ရှိရမယ့် ပျော်ရွှင်မှု (၅)မျိုး …
May 19, 2019 Admin Kwee RELATIONSHIP Comments Off on အချစ်ကို လိုက်မရှာတော့တဲ့ သူတွေသာ တွေ့ရှိရမယ့် ပျော်ရွှင်မှု (၅)မျိုး …
ချစ်သူမရှိဘဲ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အထီးကျန်တာတွေ၊ အားငယ်တာမျိုးတွေ ခံစားမနေသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ သင်တစ်ယောက်တည်းလည်း ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်လို့ပါပဲ။ အချစ်ဆိုတာ လိုက်ရှာနေရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ အချိန်တန်တဲ့အခါ သူ့အလိုလိုရောက်လာတာမျိုးပါ။ ဒါကိုနားလည်ပြီး အချစ်ကို လိုက်မရှာတော့တဲ့သူတွေသာ တွေ့ရှိရမယ့် ပျော်ရွှင်မှု (၅) မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။
(၁) လွတ်လပ်တယ် ။
လွတ်လပ်မှုဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့ အချိန်မှာ ပိုပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ သင်ဟာ ဘယ်သူ့အမြင်ကိုမှ ဂရုစိုက်စရာ မလိုတော့သလို၊ လိုက်ညှိနေစရာလည်း မလိုတော့ပါဘူး။ သွားချင်တဲ့နေရာကို သွား၊ တွေ့ချင်တဲ့သူနဲ့တွေ့၊ ဝယ်ချင်တာတွေဝယ်ပြီး လုပ်ချင်တာမှန်သမျှကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်နိုင်သွားပါပြီ။ သင့်စိတ်နဲ့ သင့်ကိုယ် တစ်ထပ်တည်း ကျနေတဲ့အတွက် သင့်လောက်လွတ်လပ်တဲ့သူ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ပါဘူး …။
(၂) ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေနိုင်တယ် ။
အပြင်သွားခါနီးတိုင်း အဝတ်အစားတွေရွေး၊ အလှတွေပြင်ပြီး သူ့မျက်လုံးထဲမှာ လှနေဖို့ သင်ကြိုးစားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ သင်ကြိုက်တဲ့ အဝတ်အစားကို ဝတ်၊ မပြင်မဆင်ဘဲနဲ့လည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လျှောက်သွားနေလို့ရပါတယ်။ စိတ်ကျဉ်းကျပ်နေစရာ ဘာမှမရှိတော့သလို၊ အရာအားလုံးက သင့်သဘော၊ သင့်အလိုအတိုင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေနိုင်သွားပီပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
(၃) သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပိုပြီးချစ်ခင်လာမယ်
အရင်တုန်းက သူငယ်ချင်းတွေကို အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့သမျှ အခုချိန်မှာတော့ အတိုးချပြီး အချိန်ပေးနိုင်သွားပါပြီ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချင်းချင်း စကြနောက်ကြ၊ မုန့်တွေစား၊ လည်ကြပတ်ကြနဲ့ ပျင်းရတယ်လို့ကို ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေဟာ ဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲဆိုတာ နားလည်လာမှာဖြစ်ပြီး ဘဝမှာ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အရေးပါမှုကို ပိုပိုပြီး နာလည်လာပါလိမ့် မယ် …။
(၄) စိတ်ဝင်စားစရာအသစ်တွေ တွေ့လာမယ် ။
အချစ်ကို မရှာတော့တဲ့နောက်မှာ သင်ဟာသင့်ကိုယ်သင် ပိုပြီးတွေ့ရှိလာရမှာပါ။ ဝါသနာအသစ်လေးတွေ၊ သူငယ်ချင်းအသစ်၊ လှုပ်ရှားမှုအသစ်လေးတွေနဲ့ အရင်က မသွားခဲ့ဖူးတဲ့နေရာလေးတွေ၊ မလုပ်ခဲ့ရတဲ့ အရာလေးတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်နိုင်တော့မှာပါ။ သင်ဟာ ဘယ်အရာကို တကယ်ဝါသနာပါပြီး ဘယ်အရာတွေပေါ်မှာ အားသားလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်း သိရှိလာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
(၅) ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိလာမယ် ။
အပေါ်က အချက်တွေအားလုံးကို လုပ်နိုင်သွားတဲ့သင်ဟာ ခုချိန်မှာတော့ အရင်ကထက် အများကြီး ဆွဲဆောင်မှု ပိုရှိသွားပါပြီ။ သင်ဟာ လွတ်လပ်ပြီး အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်၊ ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာနဲ့ ကိုယ် ဘဝကို ကောင်းမွန်စွာ ဖြတ်သန်းနေနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာကြောင့်ပါ နော် ….။
# Unicode Version # ဖြင့် ဖတ်ပါ #
ခဈြသူမရှိဘဲ တဈယောကျတညျး ဖွဈနတေဲ့သူတှအေနနေဲ့ အထီးကနျြတာတှေ၊ အားငယျတာမြိုးတှေ ခံစားမနသေငျ့ပါဘူး။ အကွောငျးကတော့ သငျတဈယောကျတညျးလညျး ဘဝကို ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးနိုငျလို့ပါပဲ။ အခဈြဆိုတာ လိုကျရှာနရေတဲ့အရာမဟုတျပါဘူး။ အခြိနျတနျတဲ့အခါ သူ့အလိုလိုရောကျလာတာမြိုးပါ။ ဒါကိုနားလညျပွီး အခဈြကို လိုကျမရှာတော့တဲ့သူတှသော တှရှေိ့ရမယျ့ ပြျောရှငျမှု (၅) မြိုးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော …။
(၁) လှတျလပျတယျ ။
လှတျလပျမှုဆိုတာ တဈယောကျတညျးရှိတဲ့ အခြိနျမှာ ပိုပွီးပွညျ့စုံပါတယျ။ သငျဟာ ဘယျသူ့အမွငျကိုမှ ဂရုစိုကျစရာ မလိုတော့သလို၊ လိုကျညှိနစေရာလညျး မလိုတော့ပါဘူး။ သှားခငျြတဲ့နရောကို သှား၊ တှခေ့ငျြတဲ့သူနဲ့တှေ့၊ ဝယျခငျြတာတှဝေယျပွီး လုပျခငျြတာမှနျသမြှကို လှတျလပျစှာ လုပျနိုငျသှားပါပွီ။ သငျ့စိတျနဲ့ သငျ့ကိုယျ တဈထပျတညျး ကနြတေဲ့အတှကျ သငျ့လောကျလှတျလပျတဲ့သူ ဘယျသူမှ မရှိတော့ပါဘူး …။
(၂) ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနနေိုငျတယျ ။
အပွငျသှားခါနီးတိုငျး အဝတျအစားတှရှေေး၊ အလှတှပွေငျပွီး သူ့မကျြလုံးထဲမှာ လှနဖေို့ သငျကွိုးစားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ သငျကွိုကျတဲ့ အဝတျအစားကို ဝတျ၊ မပွငျမဆငျဘဲနဲ့လညျး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လြှောကျသှားနလေို့ရပါတယျ။ စိတျကဉျြးကပျြနစေရာ ဘာမှမရှိတော့သလို၊ အရာအားလုံးက သငျ့သဘော၊ သငျ့အလိုအတိုငျးပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ သငျဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျ နနေိုငျသှားပီပဲ ဖွဈပါတယျ …။
(၃) သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပိုပွီးခဈြခငျလာမယျ
အရငျတုနျးက သူငယျခငျြးတှကေို အခြိနျမပေးနိုငျခဲ့သမြှ အခုခြိနျမှာတော့ အတိုးခပြွီး အခြိနျပေးနိုငျသှားပါပွီ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အခငျြးခငျြး စကွနောကျကွ၊ မုနျ့တှစေား၊ လညျကွပတျကွနဲ့ ပငျြးရတယျလို့ကို ရှိမှာမဟုတျပါဘူး။ သူငယျခငျြးတှဟော ဘယျလောကျခဈြစရာကောငျးလဲဆိုတာ နားလညျလာမှာဖွဈပွီး ဘဝမှာ သူငယျခငျြးတှရေဲ့ အရေးပါမှုကို ပိုပိုပွီး နာလညျလာပါလိမျ့ မယျ …။
(၄) စိတျဝငျစားစရာအသဈတှေ တှလေ့ာမယျ ။
အခဈြကို မရှာတော့တဲ့နောကျမှာ သငျဟာသငျ့ကိုယျသငျ ပိုပွီးတှရှေိ့လာရမှာပါ။ ဝါသနာအသဈလေးတှေ၊ သူငယျခငျြးအသဈ၊ လှုပျရှားမှုအသဈလေးတှနေဲ့ အရငျက မသှားခဲ့ဖူးတဲ့နရောလေးတှေ၊ မလုပျခဲ့ရတဲ့ အရာလေးတှကေို လှတျလှတျလပျလပျ လုပျနိုငျတော့မှာပါ။ သငျဟာ ဘယျအရာကို တကယျဝါသနာပါပွီး ဘယျအရာတှပေျေါမှာ အားသားလဲဆိုတာ ကောငျးကောငျး သိရှိလာမှာပဲ ဖွဈပါတယျ …။
(၅) ပိုပွီးဆှဲဆောငျမှုရှိလာမယျ ။
အပျေါက အခကျြတှအေားလုံးကို လုပျနိုငျသှားတဲ့သငျဟာ ခုခြိနျမှာတော့ အရငျကထကျ အမြားကွီး ဆှဲဆောငျမှု ပိုရှိသှားပါပွီ။ သငျဟာ လှတျလပျပွီး အရညျအခငျြးရှိတဲ့သူတဈယောကျဖွဈနပွေီး ကိုယျ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျအခြိနျ၊ ကိုယျ့ရဲ့ဝါသနာနဲ့ ကိုယျ ဘဝကို ကောငျးမှနျစှာ ဖွတျသနျးနနေိုငျပွီဖွဈတဲ့ တညျငွိမျတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျဖွဈသှားတာကွောငျ့ပါ နျော ….။
ခေတ်ပေါ်ဆေးဝါးများ ၀ယ်ယူရန်ခက်ခဲသူတို့ အတွက် ညှင်းပျောက်ကြောင်းဆေးနည်းကောင်းလေး…!
ယာဉ်မရပ်ရ ဆိုင်းဘုတ်ချထားသည့် အိမ်ပိုင်ရှင်များ အခွန်ဆောင်ရတော့မည်…!
ခန္ဓာကိုယ် အနံ့အသက်က သိနိုင်တဲ့ သင့်ကျန်းမာရေး အကြောင်း
သင့်မှာ ချစ်သူ (၂)ယောက်နဲ့အထက် ရှိတယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာပါ
This Month : 23910
This Year : 277380
Total Users : 636404
Total views : 2983379